Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola lasePutukezi I-Ricardo Pereira Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "IPeri“. Indaba yethu yeRicardo Pereira Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Ukuphila nokukhuphuka kukaRicardo Pereira. Ama-Credits Ama-Image: Premier League, I-marchadovapor Blog kanye Instagram.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumuntu onolaka futhi oguquguqukayo osebenza ngokugcwele othanda ukuqhuma ebhokisini, ekhombisa amakhono akhe amakhulu okuhlasela. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biology kaRicardo Pereira ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso weRicardo Pereira Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala phansi, amagama akhe aphelele nguRicardo Domingos Barbosa. URicardo Pereira wazalwa ngosuku lwe-6th lwango-Okthoba, i-1993 kubazali bakhe edolobheni laseLisbon, ePortugal. Lowo ongakwesokunxele emuva onolaka unomndeni wakhe waseCape Verde lapho umama wakhe nobaba wakhe evela khona. Ngenkathi kuncane okwaziwayo mayelana nobaba kaRicardo Pereira, wayaziwa ukuthi uchithe ingxenye enkulu yeminyaka yakhe yobudala nomama wakhe ababenethonya elikhulu kuye esemncane.
Hlangana noMama kaRicardo Pereira owayenethonya elikhulu ekukhulisweni kwakhe. Isikweletu Sezithombe: Instagram
Uthi bewazi?… Izwe lapho abazali bakaRicardo bavela khona, iCape Verde ikhona idume ngesimo sezulu sayo esishisayo, iziqhingi zentaba-mlilo nokudla okumnandi. Izwe latholakala phakathi kwe-1460 ne-1462 ngabatilosi abangamaPutukezi, okuyiqiniso elichaza ukuthi kungani iningi lezakhamizi zakwamanye amazwe zithanda ukuhlala ePortugal. ICape Verde eya ePortugal ilungile idrayivu elula ngeNorth Atlantic.
URicardo Pereira unomndeni wakhe odabuka eCape Verde. Isikweletu Sezithombe: ICapeVerdeIslands
Cishe i-1990 ngasekuqaleni kokuzalwa kukaRicardo Pereira, kwakulinganiselwa inani labantu be-50,000 ICape Verdean imvelaphi kazwelonke ehlala ePortugal. Yize kungenzeka ungazi! URicardo Pereira uyi HHAYI okuwukuphela kwesibhakela esidabuka eCape Verde. Uthi bewazi?… Owayekade eyiManchester United Legends, Cristiano Ronaldo noLuis Nani nabo banemindeni yabo abaqhamuka ezweni elisenyakatho nentshonalanga ye-Afrika (Cape Verde).
Ukuthi Ukukhula eLisbon kwakubukeka kanjani: URicardo Pereira wakhula kakhulu eduze komama bakhe, eLisbon, inhloko-dolobha nedolobha elikhulu kunazo zonke lasePortugal. Ungumuzi onawo amaphutha kanye namathuba. Ngenkathi ezinye izingane zinikezela ekucindezelweni kontanga endaweni yazo enezinkinga, abanye njengoRicardo bathatha amathuba emidlalo owethulwe yidolobha. The Umdabu waseLisbon akakaze alushaye indiva uhlangothi lwezemidlalo lomuzi njengoba ayeyithanda kakhulu ibhola njengengane.
Amaqiniso weRicardo Pereira Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
URicardo wayenesifiso sokudlala ibhola kahle kusuka lapho ebuka umdlalo wakhe wokuqala webhola ku-TV. Waqala ekuqaleni efunda ukuhweba kwakhe ngebhola emkhakheni wasekhaya weLisbon. Ukubamba iqhaza ebholeni kwakuyindlela yakhe yokuzifundisa. Umsebenzi wakhe wokusebenza kanzima ngaphambi kwesikhathi wakhokha ngemuva kokuqashelwa yi-scout yebhola.
Eminyakeni engu-10, i-Sporting scout (kusuka ku-Futebol Benfica, AKA Fofó) ibheke inqubekela phambili kaRicardo yasondela kuye. Umhloli wakhuluma nabazali bakhe ngesidingo sokuthatha indodana yabo I-Futebol Benfica academy ekufuneni imfundo yebhola elingcono. Abazali bakaRicardo Pereira bavumelana futhi kwathi lapho beneminyaka engu-11, indodana yabo yazingena esikoleni semiklomelo ehlukahlukene esendaweni yaseBenfica eLisbon.
URicardo Pereira Ibhola Lasekuqaleni Kwemfundo Yebhola neNdaba Yendaba Yokunakekela. Isikweletu Sezithombe:
Ukunikeza ibhola ekuqaleni lokhu kwakuyinto abazali bakhe bakaRicardo ababeyifuna kuye. Ngenkathi ekilabhu, uRicardo omncane wayenakekelwa UManuel Fernandes (osesithombeni ongenhla), indoda ehole ikusasa leqembu iminyaka engaphezulu kwe-30.
Amaqiniso weRicardo Pereira Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ekuqaleni kwesikole, uRicardo Pereira wayengeke acabange okunye ngaphandle kokusebenza, ukugxila futhi angalokothi anikezele kungenzeka. Ngaleso sikhathi, owokuzalwa eLisbon ndawonye nabalingani beqembu lakhe, ukuthandwa kwabadlali abadumile abanjengo; UGelson Martins, uRúben Semedo, bonke kulandele ezinyathelweni zika Robinho.
Impumelelo yokuqala yezemidlalo kaRicardo yeza ngemidlalo yokuncintisana lapho ayezozama khona ukulingisa isenzo nokuthinta kwesithombe sakhe (Robinho) ayebheke kuye. Njengoba ayenamandla angajwayelekile ngobudala bakhe obumnandi, lo mfundi osemncane wazibona ekhula ezinhlwini zokufunda. Ngezansi isithombe esingavamile sikaRicardo phakathi neminyaka yakhe yokuqala ne I-Futebol Benfica ngonyaka we-2002.
URicardo Pereira Ukuphila Kwasekuqaleni Ngebhola- Izinsuku zakhe e-Futebol Benfica. Isikweletu Sezithombe: Instagram
Njengenqubekela phambili yakhe lapho, uRicardo waqala ukuthola ama-euro ayinkulungwane, ngokuhamba kwesikhathi, waqala ukuthola enye i-2,000 lapho ekhuphuka. Ngemuva kokupela iminyaka emithathu, uRicardo yaqhubeka nenqubo yakhe yokuvuthwa kwebhola, nesikhungo se-Sporting CP lapho asebenzisa khona iminyaka eyengeziwe ye-6.
Amaqiniso weRicardo Pereira Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela
Lapho i-Going Got Tough: Eminyakeni engu-17, isikhathi ayesezothweswa iziqu enethemba eliphezulu lokungena ebholeni eliphezulu, ngeshwa kwenzeka. URicardo Pereira ohluphekayo ukhishwe yiP Sporting CP. Esikhundleni sokuyeka iphupho lakhe, umsakazi webhola wenqatshwa wajoyina i-Associação Naval 1º de Maio, eyaziwa njenge I-Naval, iklabhu yebhola elincane e-Figueira da Foz. Ngemuva konyaka, wadlulela eVitória Guimaraes, iklabhu elaziwa ngokuthi yindawo yokuqashwa kwamakilabhu aphezulu ePortugal. Ngenkathi ekilabhini, uRicardo wathola ukungena eqenjini labo eliphakeme.
URicardo Pereira wakhuthazelela ukuqala okunzima neqembu eliphakeme. Ngenxa yokungasebenzi kahle, uRicardo waphonswa kuVitória Guimarães B (iqembu eligcina i-Vitória Guimarães) okwesikhashana. Esikhundleni sokuyeka iphupho lakhe futhi, lo msubathi osemncane wanquma ukuyilwela indlela yakhe ukuze abuyelwe inhlonipho yemenenja yakhe. Ekugcineni, kwaba nenqubekela phambili ebuyela emuva emsebenzini wakhe omkhulu.
URicardo Pereira wasebenza wabuyela eqenjini lokuqala laseGuimarães ngemuva kokuphonswa ezitolo. Isikweletu Sezithombe: Mashiadovapor-Blogspot noJovensPromessasBlog
Ukuba Yiqhawe Lendebe Yokugcina: URicardo wayazi ukuthi uhlangothi lwakhe lwalungeluhle ngokwanele ukuthi anganqoba uNdunankulu wasePortugal. Ngakho-ke, wasebenzisa amandla akhe onke ku-2012-13 edition ye-Portuguese Cup, isu elakhokha.
Uthi bewazi?… URicardo waba FERAL HERO kumdlalo wokugcina we-2012-2013 wamaPutukezi weNdebe yoMhlaba. Wayesemuva komnqobi we2-1 kowamanqamu bebhekene neSL Benfica. Kowamanqamu, usebenzisane nomgadli weBenfica, u-Artur Moraes, ngokudubula ibanga elide ukubeka iklabhu yakhe phambili, ethi yi-silverware yakhe yokuqala.
URicardo Pereira wasiza iqembu lakhe ukuthi liwine i-2012-2013 Taça de Portugal. Isikweletu Sezithombe: IG
Lapho Ukuqhubeka Kuqhubeka Futhi: Ukuba ngumuntu oyinkanyezi futhi ukunqoba indebe yasePortugal kwakuyicebo elihle likaRicardo lokungena eqenjini elikhulu. Kwi-16th ka-Ephreli 2013, ngaphambi kokuthi kuphele isizini, uRicardo Pereira wajoyina iFC Porto enokulindelwa okukhulu emahlombe akhe.
Nalapha futhi, izinto bezingahambi kahle njengoba bekuhleliwe futhi kwakuyisikhathi lapho iklabhu yakhe yayithola inkathi yezinguquko ezinkulu. URicardo oMpofu owayejwayele ukudlala njengephambili wavele waphelelwa amandla okuhlasela ayebonakala kakhulu ngeqembu lakhe lakudala iGuimarães.
Lapho i-Going Got Tough yeRicardo Pereira- Isikweletu Sezithombe: Ionline Sapo
Ngesikhathi alahlekelwa izimfanelo zakhe ezihlaselayo, umdabu waseLisbon wakhombisa ukuthuthuka ohlangothini lokuvikela umdlalo wakhe. Lokhu kwenze iMenenja yakhe (uPaul Fonseca) yamguqula kusuka phambili iye emuva-ngokuphelele, isikhundla asidlalayo ngesikhathi sokubhala.
Naphezu kokuguqulwa, izinselelo zikaRicardo zaqhubeka. Noma nje emuva kwesokudla, bekukhona ukuncintisana ne UDanilo njengembangi yakhe. Ngenkathi uDanilo eya eMadrid, indawo aqala ngayo uPereira yayingakaqinisekiswa njengoba uMaxi Pereira, wasayina kuBenfica wakhethwa ukuba abe yisikhundla sakhe. Ukukhetha isinqumo sokugcina, uRicardo wanquma ukuyishiya imalimboleko yakhe ekilabhini.
Amaqiniso weRicardo Pereira Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ekudumeni
URicardo Pereira ubolekiswe iminyaka emibili kwikilabhu yaseFrance i-OGC Nice lapho egcine khona isikhundla sakhe sokuzivikela. Esikhundleni sokudilika, umvikeli ukhula emandleni emandla. Ngaphakathi udaba lwamasonto, uRicardo Pereira wasuka endodeni ekhohliwe e-FC Porto waba ngomunye wezambulo ezinkulu zikaLigue 1. Ekilabhini, wathola ukuthandwa nodumo oluningi.
Ukunyuka okumangalisayo kukaRicardo Pereira eNice. Isikweletu: I-HITC
Ngemuva kokubolekwa kwemali yakhe emibili neklabhu, uRicardo waqala ukuzwa isidingo sokuya endaweni entsha. Ukuthuthela eNgilandi ukujoyina iLeicester kwaba ukuzethemba kukhula njengoba umdabu waseLisbon ejabule ngesiko lamaNgisi, indlela yokuqeqeshwa kweklabhu kanye nomkhuba.
Ngesizini yakhe yokuqala eLeicester, amandla kaPereira okuzivikela asize iqembu lakhe lavumela kuphela imigomo yeligi ye-34 ngesizini, okuyinombolo ehlonishwayo yohlangothi lwasemuva kwetafula, olungcono kuneManchester United ne-Arsenal. Ekupheleni kwesizini yakhe yokuqala, uRicardo wavotelwa I-2018 / 2019 Leicester Player yeSizini futhi umklomelo we Isidlalisi seLeicester Player seSizini 2018 / 2019.
I-2018-2019 Leicester City Player yeSizini noMdlali Wabadlali Womklomelo Wonyaka. Isikweletu Sezithombe: Twitter
Ukuwina le miklomelo bekuqinisa isibindi kuRicardo Pereira njengaye ukukhuphuka kwe-meteoric kuya ekuveleni kuyaqhubeka kusizini ye-2019 / 2020. Noma esesikhundleni sakhe sangakwesokunxele emuva, ulaka lukaPereira futhi ukwenza izinto ngezindlela ezahlukene kusize ukusunduza iqembu lakhe libuyele ezindaweni zeChampions League.
Engqondweni yabathandi bebhola ePortugal nasemhlabeni wonke, uRicardo Pereira ngempela iphakathi kokuhamba phambili emugqeni wokukhiqizwa ongapheli wesobunxele obuhle obumangalisayo abazenzele igama ebholeni. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Amaqiniso weRicardo Pereira Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngemuva kwayo yonke indoda ephumelelayo, kunowesifazane omangele egoqa amehlo akhe. Ngokuphumelela futhi ukhuphuka ezimfunweni ezinkulu zebhola lesiNgisi, kuqinisekile ukuthi abanye abalandeli bebhola kumele ngabe babuzile ukuthi ngabe uRicardo Pereira unentombi noma unkosikazi. Akunakuphikwa ukuthi ukubukeka kwakhe okuhle kuhlangene nesitayela sakhe sokudlala bekungeke kumenze abe ngumuntu othandana nabesifazane.
Ngubani intombi kaRicardo Pereira's Girl ?. Isikweletu Sezithombe- Instagram
Ngokwazi kwethu, uRicardo Pereira ushiye umndeni wakhe emuva ukuyothatha isibhamu sakhe kuPremier League. AmaPutukezi afudukela eNgilandi eyedwa, kungekho nkosikazi, intombi noma izingane ezizomphelezela. Njengasikhathi sokubhala, kuvela ukuthi ukhethe ukugxila emfundweni yakhe, egcina isimo sakhe sobudlelwane siyimfihlo kakhulu njengendlela yokugwema noma ikuphi ukubonwa. Ukwahlulela ngeminyaka yakhe nokuvuthwa, uRicardo Pereira angaba nentombi kodwa akhethe ukwenza ubuhlobo bakhe naye bube yimfihlo kakhulu.
Amaqiniso weRicardo Pereira Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi impilo yomuntu kaRicardo Pereira kude nebhola likanobhutshuzwayo kuzokusiza uthole isithombe esingcono sobuntu bakhe. Ukuqala, ungumuntu okholelwa kumagama athi… "Okubalulekile akuyona ukuthi ubani omamatheka nawe, kepha ngubani ozoba nawe lapho ungakwazi ukumamatheka".
Ukwazi Ukuphila Komuntu KaRicardo Pereira kude nebhola. Isikweletu Sezithombe- Instagram
URicardo Pereira usebenzisa la magama angokomzwelo ukukhombisa ngempi ayenayo ekuqaleni komsebenzi, eyayigcwele ukwenqatshwa kanye nokuhamba kancane. Ngesikhathi sokubhala, kungukubhalwa kwesimo okuvezwe kuye Instagram ikhasi.
Futhi empilweni yakhe, uRicardo ungumuntu ozimisele futhi ozinqumayo, ozocwaninga aze athole iqiniso elizoholela empumelelweni. Njengomuntu ngamunye, unesimo sangaphakathi sokuzimela esenza inqubekelaphambili ebonakalayo empilweni yakhe yomuntu nobungcweti.
Ukufana kwenja: Abadlali bebhola, ukuthandwa kwe Lionel Messi, U-Alexis Sanchez, I-Mesut Ozil futhi Neymar, thanda izinja zabo futhi uRicardo Pereira akayona into eyehlukile. Ngisho nawe kunezwi elithi akukho ukuthembeka okusele kulo mdlalo wesimanje, ngokuqinisekile akubheki ubudlelwano obabiwe phakathi kwenkanyezi yasePortugal nenja yakhe.
Hlangana nenja kaRicardo Pereira. Isikweletu Sezithombe: Instagram futhi Twitter
Amaqiniso weRicardo Pereira Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
KuRicardo Pereira, ukhiye wokuphila impilo ejabulisayo ukuthi abe nokulinganisela okuhle, okusho ukuthi ngeke azibophezele ekwenzeni ibhola ngaphandle kokubeka isikhathi esanele sokuba ngumama wakhe amthandayo. URicardo's Pereira's mum ngesikhathi sokubhala kwenzeka ukuphela kwelungu lomndeni esizindeni sakhe somphakathi. Ngezansi kwesithombe sabo bobabili umama nendodana njengoba bobabili bevakashela iBuckingham Palace.
URicardo Pereira isithombe eceleni kukaMama wakhe. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter
Ngokungafani noPereira mum, ubaba wakhe, umfowabo kanye nodadewabo bonke bakhethe ukuthi bangafuni ukuqashelwa emphakathini.
Amaqiniso weRicardo Pereira Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Uma kukhulunywa ngempilo, uRicardo Pereira unethalente lokugcina ukulingana phakathi kokuchitha imali nokonga imali. Yize ethola imali ephakeme engu- $ 3.6 million emiholweni yaminyaka yonke, uyaqeqeshwa ngokwanele ukuba abambelele kwisabelomali sakhe. Ehamba emithonjeni yakhe yezokuxhumana, akukho zimpawu zokuthi ubuphila ubukhazikhazi obonakala kalula yizimoto ezimbalwa, izindlu ezigqokile nezigqoko ezibiza kakhulu. Njengoba kubonwe ngezansi, uRicardo Pereira usebenzisa imali yakhe kuphela ekuzijabuliseni nasemanzini.
URicardo Pereira usebenzisa imali yakhe kwezokuzijabulisa zasemanzini nokuzivocavoca. Isikweletu Sezithombe: Twitter futhi Instagram
Amaqiniso weRicardo Pereira Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Umshayeli Womjaho: Ngenkathi iningi labathandi bebhola likanobhutshuzwayo livame ukudlala igalofu noma i-FIFA, kukhona abanye abangenela kakhulu lapho bebheka izinto ezizokwenza kude nesibalo. URicardo Pereira ungomunye walabo abanokuzilibazisa ongeke ulindele. Uthi bewazi?… Unguchwepheshe kumjaho kaKart ovela ku-Daytona Tamworth.
URicardo Pereira ungumlandeli we-motorsport oveze umcimbi we-daytona motorsport. Isikweletu Sezithombe: Twitter
Inxusa leBrand kanye noMfundi weNyuvesi yase-UK: Umdlalo omuhle webhola uhlupheka ukubukwa okuyinkimbinkimbi ngabaningi abacabanga ukuthi abadlali bebhola abafundile, abanobuhlakani kakhulu futhi badume ngokuthandana nokuzitika ngezintombi nto futhi belwa. Ukumba ngokujule, sibona ukuthi uRicardo Pereira ungomunye walabo abahamba ngebhola elinobuhle onedumela lobuhlakani futhi onenqwaba yobuchopho ngaphezulu kwethalente lakhe.
URicardo Pereira Uthando lwamakhompiyutha nezifundo. Isikweletu Sezithombe: DMI
Ngokombiko, ungumfundi we-inthanethi nenxusa lomkhiqizo eDe Montfort University, eyunivesithi yomphakathi edolobheni laseLeicester, e-England. URicardo Pereira uthathe ukuphefumlelwa kwakhe kusuka UWilfred Ndidi, inxusa lomkhiqizo esikanye naye ngesikhathi sokuloba lifunda ukuthola iziqu kwezamabhizinisi nezokuphatha eyunivesithi.
Ukuhlonishwa ngokufingqiwe: Iningi labathandi bebhola okubandakanya wena ukufunda le ndatshana kungenzeka ukuthi lazana noRicardo Pereira ngesizini yakhe yezithelo 2018 / 2019 neLeicester City FC. Ngezansi umbono omncane walokho akuthola ngaphambi kwesikhathi sakhe eLeicester.
Ricardo Pereira Untold Isibalo Sabahlonishwa. Isikweletu Sezithombe: I-LeicesterMercury
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iRicardo Pereira Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.